🥇 ▷ Tomb Raider I Wuxuu Imaanayaa App Store loogu talagalay iPhone iyo iPad ✅
Tomb Raider I Wuxuu Imaanayaa App Store loogu talagalay iPhone iyo iPad
Ciyaar ayaa soo galaysa App Store oo calaamad u ah kulamada fiidiyowga ee 1996, muuqaalkiisa cusub ee labada consoles sida Playstation ama Sega Saturn, iyo PC. Ciyaarta kaas oo protagonist-ku caan ku yahay soojiidashada iyo soo jiidashada kaasoo, dhawr sano ka dib, go’aansaday inuu sumcad u noqdo khamaarka, waxaan ka wada hadalnay ciyaarta Tomb Raider.
Tomb Raider waxaa laga heli karaa App Store-ka iPhone iyo iPad
Tomb Raider waa ciyaar ay ka buuxaan ficil iyo isbadel ku yimaada qaabka Indiana Jones kaas oo saameyn ku yeeshay adduunka ciyaaraha fiidiyowga ee la daabacay sannadaha soo socda, oo hadda ka dhigaya muuqaalkiisii ​​taariikhiga ahaa ee Store Store ee aaladda iOS (iPhone iyo iPad).
Lara Croft ayaa ah hormoodka ugu weyn ee ciyaartan, khabiir ku xeel dheer ciyaaraha fudud oo qatar ku wata qoryaheeda oo aan xakamayn doonno iyada oo aan uga mahadcelineyno shaashadda taabashada ah ee aan ku wajaheyno dhacdooyin taariikhi ah oo bilow u ahaa ciyaaro taxane ah, sidoo kale khuraafaad, marka lagu daro sidoo kale gaaritaanka shaashadda weyn ee ay mataashay Angelina Jolie.
Lara Croft iyo Classical Tomb Raider ee Classic 3D Adventure ee dhamaan aaladaha macruufka
Ciyaartan xiisaha leh waxaa lagu qalabeeyay mashiinka garaafka 3D kaas oo la waafajiyay xilliyadii loo abuuray, kaas oo qaabab kala duwan oo ciyaarta sida sahaminta, halxiraalaha iyo waxyaabo kaloo badan la mideeyo, dhammaantoodna ku jira jawi saddex geesood ah waqtiga dhabta ah.
Kuwa garanaya ciyaartan waxa hubaal ah inaan loo baahnayn soo bandhigid dheeraad ah oo loogu talagalay kuwa aan aqoon, waxaan kugula talineynaa, had iyo jeer waa u qalantaa ciyaarista nooca noocan ah iyo waxbadan haddii ay ka imaan karto iPhone-kaaga, iPod taabashada, iPad ama iPad mini.
Kala soo bax Tomb Raider I ee iPhone, iPod taabashada, iPad iyo iPad mini
Haddii aad rabto inaad kala soo baxdo ciyaartaan khuraafaadka ah ee aaladda iOSkaaga (iPhone, iPad), ka dib waxaad ka heli doontaa xiriirka tooska ah ee ka soo degsiga App Store.
Tomb Raider I ku jira App Store, waxay u baahan tahay macruufka 7.0 ama wixii ka dambeeya. La jaan qaada iPhone, iPad iyo iPod taabashada. Barnaamijkan waxaa loo habeeyay iPhone 5. Waxaa lagu heli karaa luqadaha soo socda: Jarmalka, Faransiiska, Ingiriiska.
Hadaad jeceshahay ciyaartan, ha ka shakin u codee ama la wadaag iyada oo loo marayo shabakadaha bulshada ee aad ugu jeceshahay (Twitter, Facebook, iwm.) badhamada waxaad ka heli doontaa kor.